Ukuzilelana Kwabantu Besifazane Abasesithenjini – The Ulwazi Programme
Ukuzilelana Kwabantu Besifazane Abasesithenjini
Ukuzila uma kushoniwe kuwusikompilo lwabantu abathile abamnyama. Imindeni iyahlukana ngendlela ezila ngayo. Lapha sizobheka okwakwenziwa ngabantu uma beganele esithenjini. Esikhathini sakudala umuntu wesifazane uma eganile wayehlala ekhaya akhulise izingane kuthi umyeni wayo asebenzele umndeni. Ukuzilelana kwakwenzeka uma omunye wabantu besifazane isimo siphoqa ukuthi ashiye ekhaya ayosebenza edolobheni. Lokhu wayekwenza ngokuxhumana nomndeni wonke ukuthola imvume yokuthi ahambe. Nokuthi umndeni ubheke umuntu ongasala nezingane zalowo osuke eyosebenza kude nasekhaya. Lapha kulengxoxo sibheka indlela ekushintshwana ngayo ngenzila abantu besifazane abagane indoda eyodwa.
Ezikhathini zakudala zazingekho izingcingo zokuthi abantu baxhumane uma kunesimo esivelile ekhaya. Njengokuthi uma kukhona umuntu oshonile bakwazi ukuxhumana kahle. Lowo osuke ehambile ekhaya kwakuvame ukuthi imiyalezo bayithole sekudlule isikhathi noma bafike sekwangcwatshwa sebeyobeka itshe. Kuthiwa umuntu wesifazane oshonelwe yingane engekho ekhaya umnakwabo uyaye athathe indawo yakhe ngokuthi ahlale emakhandleleni azile kuze kufike isikhathi lapho kufihlwa khona agqoke inzila uma umzali wengane eshonile engakafiki.
Ngesikhathi esefika ekhaya kuyaye kuhlatshwe imbuzi ukukhumula inzila kulowo oyigqokile bese igqokwa ngumnikazi wayo. Lembuzi kwakungeyokubika emadlozini ngalokho okwakwenziwa kuphinde kugezwe lowo obeyigqokile ukususa ifu elimnyama kuye. Kuyenzeka ukuthi umuntu engaganele esithenjini naye wayehlalelwa ngamalunga omndeni aze afike athathe indawo yakhe. Kujwayeleke ukuthi kube umuntu omdala ekhaya ohlala emakhandleleni uma bengasekho abazali kuhlala izihlobo.
Categories Culture Tags Amasiko esintu, Death, Traditional Ceremonies, Ukufa